Matiu 1 – Baịbụl Nso Nke Ndị Nkịtị – The Authorised Lay Bible
Matiu 1 – Baịbụl Nso Nke Ndị Nkịtị
laybibleblog	Uncategorized	 July 3, 2017 July 3, 2017 2 Minutes
1. Akwụkwọ dị nsọ nke usoro ọmụmụ Jịsọs Kraịst, nwa Devid, nwa Ebraham.
2. Ebraham mụrụ Aịzik, Aịzik amụọ Jekọb, Jekọb amụọ Judá ná kwa, ụmụnna ndị ọzọ nke ya.
3. Juda mụrụ Perez, na Zara site ná [nwányị onye aha-ya bụ] Tama. Perez mụrụ Esrọm. Esrọm amụọ Aram:
4. Aram amụọ Aminadab. Aminadab amụọ Naasson. Naasson amụọ Salmọn.
5. Ma Salmọn mụrụ Boaz site ná [nwányị onye aha-ya bụ] Rahab. Boaz mụrụ Obed site ná [nwányị onye aha-ya bụ] Rut. Obed mụrụ Jesse.
6. Ọzọkwa, Jesse mụrụ eze Devid. Eze Devid amụọ Solomọn site ná nwányị [n’oge gara aga bụ nwunye] nke Urias;
7. Ọzọkwa, Solomọn mụrụ Reboam. Reboam amụọ Abia. Abia amụọ Asa.
8. Asa amụọ Yosaphat. Yosaphat mụrụ Yoram. Yoram amụọ Ozias.
9. Ma Ozias mụrụ Yoatham. Yoatham amụọ Akhaz. Akhaz mụrụ Hezekaya.
10. Hezekaya amụọ Manase. Manase mụrụ Amon. Amon mụrụ Yechonias ná ụmụnna nke ya ndị ọzọ, ruo mgbe ejiri ike we dọọrọ ha gaa ná ala mba nke Babilon.
11. Má Yosiah mụrụ Yechonias na ya ụmụnna ndị ọzọ, ruo mgbe ejiri ike we dọọrọ ha gaa na ala mba nke Babilon.
12. Oge mgbe ejiri ike we dọọrọ ha gaa ná ala nba nke Babilon gachara, Yeconiah mụrụ Salatiel. Salatiel amụọ Zorobabel.
13. Má Zorobabel mụrụ Abuid. Abuid mụrụ Elaiakim. Elaiakim mụrụ Azor;
14. Azor mụrụ Sadoc. Sadoc mụrụ Achim. Achim amụọ Eliud.
15. Ma Eliud mụrụ Eleazer. Eleazer mụrụ Matthan. Matthan amụọ Yacob.
16. Ma Yacob mụrụ Yoseph di nke Mariam onye nke mụrụ Jizọs, onye a ná-ákpọ “Kráist.
17. N’ihi ya, ihe ọgbọ nile site n’Ebraham ruo mgbe David [bụ] ọgbọ iri ná ánọ. Ọzọkwa site Devid ruo mgbe ejiri ike dọọrọ ha gaa na ala mba nke Babilon [bụ] ọgbọ iri ná ánọ. Ọzọkwa site n’oge ejiri ike dọọrọ ha gaa na ala mba nke Babilon ruo mgbe Kraịst [bụ] ọgbọ iri ná ánọ.
18. Ọzọkwa, ọmụmụ Jizọs Kraịst bụ n’ụzọa kosi me: N’ihi na e kwere nne-ya Mariam ye na nkwa na alụmdi na nwunye ye Yoseph. Tupu ha ebiri ebi, ọ chọpụtara na onwere n’ime n’afọ ya nwa nke Onye Kasị Nsọ.
19. Ma Yoseph di ya, nihi na ọ bụ onye ezi omume, achọghị ka ekpughe ya ka ọha na eze kwa ya emo, kama ochicho ya bu ka ọ rapu ya na ịgba alụkwaghịm na nzuzo.
20. Mgbe ọ na-eche ihe ndị a, le, mọ-ozi nke Jehova pụtara ìhè n’ihu ya na nrọ, si “Yoseph, nwa Devid, atula egwu, iwere Mariam ka ọbụrụ nwunye gị: n’ihi na ime Ya bụ site na Mo Nsọ Onye Kasịri a kasi.
21. ọ ga-amụ nwa nwoke, ị ga-akpọkwa aha ya Jizọs, n’ihi na ọ ga-azọpụta ndị ya ná mmehie ha nile.
22. Ugbu a, ihe a dum mere ka ihe wee mezuo nke Jehova kwuru site n’ọnụ onye amụma, sị:
23. Lee, nwanyi na-amaghị nwoke ga-d’ime we mụọ nwa nwoke, unu ga-akpọ aha ya ịmmanuel; nke bu na-tụgharịa ya, “Chineke nọnyeere anyị”.
24. Mgbe Yoseph teta n’ụra, o mere kwa ka mmụọ ozi [nke] Jehova siri gwa ya [niwu], were nye onwe-ya nwunye ya.
25. Ma onweghị [mmekọahụ] ihe ọmụma ruo mgbe oge Mariam muru ọkpara ya: ọ we kpọ aha ya Jizọs.
Previous Post Matthew 1
Next Post Matthew 2